Gịnị bụ LinkedIn? | Martech Zone
Tuesday, July 1, 2008 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Gịnị bụ LinkedIn? Kedu ihe mere ị ga - eji sonye LinkedIn? Nke a bụ nnukwu vidiyo ọzọ sitere na ndị folks Nkịtị naanị na isiokwu ahụ!
Jikọọ na m na LinkedIn.
Tags: kpọọ n’ọrụnnukwu ụlọ ahịa ọwụwa anyanwụebe nchekwa data nduobere nnụnụusoro seoWriting
Jul 1, 2008 na 4:56 PM
Daalụ maka ịkekọrịta nnukwu intro na LinkedIn. Maka ndị na-amaghị saịtị ahụ, nke a na-akọwa ihe dị mfe, n'ụzọ doro anya, na nkenke. Lee na Sachi nke CommonCraft na-arụ ọrụ dị ịtụnanya na ụzọ PaperWorks ha.
Otu ihe m ga - ekwu bụ na LinkedIn adịghị arụ ọrụ niile ahụ, maka ọtụtụ akụkụ, maka ịchọta ma ọ bụ ịgha ndị mgbere. Approachzọ ekwuru okwu a chọrọ ka ịkwanye mkpa gị n'oge ịnwere ya nye ndị mmadụ nwere ike ịnwe ma ọ bụ nwere ike ịnwe oge ma ọ bụ ndị na-ezigara gị. Na VendorCity, anyị agbanweela usoro a ma jụọ ndị nwe ụlọ ahịa na ndị ọkachamara ka ha tinye ndụmọdụ ha n'ịntanetị. N'ụzọ ahụ, ọ na-adịkarị ebe ahụ ma enwere ike ịnweta ya oge ọ bụla mkpa bilitere. Ọbụghị naanị na ị nwere ike ozugbo ịchọta onye na-ere ahịa ịchọrọ mgbe mkpa ahụ bilitere, ị na-akwụghachi ndị na-ere ezigbo ahịa ụgwọ ọrụ ọzọ na onye ọ bụla nọ na obodo VendorCity.
Site n'ụzọ, ọ bụ onye nwe ụlọ ahịa UK B2B zigara akụkọ ọzọ dị mma gbasara ịkparịta ụka n'businessntanet. Enwere ike ịhụ ya ebe a:
Douglas, enwere m olileanya na ị ga - ewe obere oge maka ndenye ọpụpụ VendorCity.com ka anyị chere na ọ bụ kpamkpam dị iche iche na ụzọ kachasị mma iji zụọ ịkparịta ụka n'ahịa ma chọta ndị na-ere ahịa kacha mma na mpaghara gị. Dobe m akara ma ọ bụrụ na i chere na ị ga - enwe oge iji kparịta maka echiche a.